Masangano anomirira vashandi anoti haasi kufara nemashoko mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, avakataura nemusi weChishanu mudare re Politburo yebato ravo.
Vachitaura pamusangano wePolitburo uyu semutungamiri weZanu PF, VaMnangagwa vakayambira masangano evashandi, machechi, pamwe nemasangano akazvimirira, kuti anangane nemabasa awo ari pamutemo, kwete kupindira mune zvematongerwo enyika sezvaari kuita.
VaMnangagwa vakatiwo vanozviziva kuti masangano aya ari kushanda nemapato anopikisa mukuda kuvhiringidza mashandiro ehurumende yavo.
Studio7 haina kukwanisa kubata sangano re Zimbabwe Congress of Trade Unions, kuti tinzwe parimire sezvo munyori mukuru wesangano iri, VaJaphet Moyo, vanga vasiri kubatika panharembozha yavo .
Asi mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaObert Masaraure, vanoti sevashandi vane kodzero dziri mumbiro remitemo yenyika, vanoshushikana zvikuru nemashoko aVaMnangagwa.
VaMasaraure vanoti masangano evashandi haasi kuita zvematongerwo enyika, asi kuti anoburitsa nhunha dzawo kana hupfumi hwenyika huchiiswa mumadhaka nehurumende nokuti mari dzavo dzinobva muhupfumi hwenyika.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vanoti ichokwadi kuti masangano akazvimirira aya ava kuita zvematongerwo enyika achisiya basa rekuchengetedza kodzero dzevashandi.
VaMugwadi vanoti hurumende inozviziva kuti masangano aya ari kuda kuratidzira zvisiri pamutemo, uye mapurisa achange achiita basa rawo nemazvo mukuona kuti hapana anobvumidzwa kutyora mitemo.
VaMugwadi vatiwo mutungamiri weZCTU, VaPeter Mutasa, vakamboyedza kuyananisa vatungamiri veMDC vari kunetsana, izvo zvinoburitsa pachena kuti sangano iri rinodyidzana nemapato anopikisa hurumende.
Asi VaMasaraure vanoti chavanoziva ndechete vanomirira vashandi vasina bato ravanotsigira, uye varamba kuti vanotsigirwa nehurumende dzekunze.
"Chatinoziva isu ndechekuti hurumende ndiyo inodyidzana zvakanyanya nenyika dzairi kutaura dzekunze idzi. Isu sevashandi tinodyidzanawo nemasangano evashandi vedzimwe nyika," vadaro VaMasaraure.